Home Wararka Is qabqabsiga beelaha dega Puntland ee doorashooyinka oo cirka isku sii shareeraya
Is qabqabsiga beelaha dega Puntland ee doorashooyinka oo cirka isku sii shareeraya
Waxaa maalinta maalinta ka danbeeysa cirka isku sii shareeraya Is qabqabsiga beelaha dega Puntland ee doorashooyinka. Waxaana bilaawday hadalno xanaf leh oo ay beelahaas warbaahinta isku Marinayaan.
Odayaasha iyo Cuqaasha Beesha Maxamed Ciise, oo ka tirsan Beel-weynta Ciise Maxamuud, ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray Beesha Abokor Ciise.
Odayaasha oo shir ku yeeshay magaalada Garoowe, ayaa raalli-gelin ka dalbaday qaar kamid ah Nabadoonada iyo Cuqaasha Beesha Abokor Ciise, oo sida ay sheegeen gef iyo xaqiraad ku sameeyay.
Sidoo kale, waxay ka hadleen saamiga kursiga Aqalka sare ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya, kaas oo laga soo doorto Gobolka Nugaal.